Fampidirana ny tsipika famokarana zezika organika - YiZheng Heavy Machines Co., Ltd.
Ny famolavolana sy ny fanamboarana ny tsipika famokarana zezika organika iray manontolo. Ny fitaovana famokarana dia mazàna dia misy mixeur roa axis, granulator zezika organika vaovao, fanamainana roller, cooler roller, milina sieve roller, crusher rojo mitsangana, conveyor fehikibo, milina fonosana mandeha ho azy ary fitaovana fanampiny fanampiny.
Ny zezika biolojika dia azo amboarina amin'ny residana metana, fako fambolena, zezika sy zezika akoho amam-borona ary fako monisipaly. Ireo fako biolojika ireo dia mila karakaraina bebe kokoa alohan'ny hamadihana azy ireo ho zezika biolojika ara-barotra lafo amidy. Ny fampiasam-bola amin'ny famadihana ny fako ho harena dia tena mendrika tokoa.
Ny tsipika famokarana zezika voajanahary dia mety amin'ny:
- Famokarana zezika taim-biby tain'omby
- Famokarana zezika taim-biby
- Famokarana zezika zezika kisoa
- Famokarana zezika akoho sy zezika gana zezika
- Famokarana zezika organika zezika
- Famokarana zezika biolojika aorian'ny fitsaboana ny fako maloto .。
1, zezika biby: zezika akoho, zezika kisoa, zezika ondry, zezika omby, zezika soavaly, zezika bitro, sns.
Ny dingan'ny famokarana zezika biolojika dia ahitana: fikolokoloana akora → fanamasinana → fifangaroana akora (mifangaro amin'ny akora biolojika-tsy organika hafa, NPK≥4%, kojakoja ≥30%) → fitobiana → fonosana. Naoty: io tsipika famokarana io dia ho an'ny referansa ihany.
Tsy vitan'ny hoe manome rafitra famokarana zezika voajanahary fotsiny isika, fa manome fitaovana tokana ihany koa ao anatin'ny fizotrany mifanaraka amin'ny tena filàna.
1. Ny tsipika famokarana zezika biolojika dia mampiasa teknolojia famokarana mandroso, izay afaka mameno ny famokarana zezika biolojika amin'ny fotoana iray.
2. Mampiasà granulator vaovao misy patanty vaovao ho an'ny zezika biolojika, miaraka amin'ny tahan'ny granulation avo sy hery matanjaka.
3. Ny akora vokarin'ny zezika biolojika dia mety ho fako fambolena, zezika sy zezika akoho amam-borona ary fako ao an-tanàn-dehibe ary ny akora dia azo ovaina be.
4. Fampisehoana marin-toerana, fanoherana ny harafesina, fanoherana fanoherana, fanjifana angovo ambany, androm-piainana maharitra, fikojakojana sy fandidiana mety, sns.
5. Fahombiazana avo, tombony ara-toekarena tsara, fitaovana kely ary regranulator.
6. Ny fanamboarana sy ny fivoahan'ny tsipika famokarana dia azo ahitsy arakaraka ny fitakian'ny mpanjifa.
Fitaovana famokarana zezika biolojika dia misy kojakoja fanamasinana, mixer roa-axis, milina granulation zezika vaovao, fanamainana roller, cooler drum, masinina fitiliana amponga, silo, milina fonosana mandeha ho azy, crusher rojo mitsivalana, conveyor fehikibo, sns.
Drafitra famokarana zezika voajanahary:
1) fizotran'ny fermentation
Ny dumper karazana hain-tany no fitaovana fampiasaina be indrindra amin'ny fermentation. Ny stacker dia mihazakazaka dia misy tanka fermentation, lalana mandeha, rafitra herinaratra, fitaovana famindrana ary rafitra maro. Ny ampahany mivadika dia tarihin'ireo mpanodina mandroso. Ny flipper hydraulic dia afaka miakatra sy midina malalaka.
2) dingana granulation
Karazana granulator zezika biolojika vaovao no be mpampiasa amin'ny zezika zezika organika. Izy io dia granulator manokana ho an'ny akora toy ny taim-biby, voankazo lo, voany, legioma manta, zezika maitso, zezika an-dranomasina, zezika any an-tsaha, fako telo, zavamiaina bitika ary fitaovana fako biolojika hafa. Izy io dia manana tombony amin'ny tahan'ny granulation avo, fandidiana miorina, fitaovana maharitra ary fiainana maharitra, ary safidy mety amin'ny famokarana zezika organika. Ny trano fonenan'ity milina ity dia mampiasa fantsom-piraingo tsy misy tohiny, izay mateza kokoa ary tsy mihasimba. Miaraka amin'ny volavolan-tseranana fiarovana, milamina kokoa ny fiasan'ny masinina. Ny tanjaky ny granulator zezika biolojika vaovao dia avo kokoa noho ny granulator disk sy granulator amponga. Ny haben'ny sombiny dia azo ahitsy arakaraka ny fitakian'ny mpanjifa. Ny granulator dia mety indrindra amin'ny fametahana mivantana ny fako biolojika aorian'ny fanamasinana, mitahiry ny fizotra fanamainana ary mampihena be ny vidin'ny famokarana.
3) dingana fanamainana sy fampangatsiahana
Ny votoatin'ny hamandoan'ny sombin-javatra aorian'ny granulation avy amin'ny granulator dia avo, noho izany dia mila maina izy mba hahatratrarana ny fenitry ny rano. Ny fanamainana dia matetika ampiasaina hanamainana sombina misy hamandoana sy haben'ny sombiny amin'ny famokarana zezika zezika zezika. Somary avo ny maripanan'ny sombin-javatra aorian'ny fanamainana, ary tokony hampangatsiaka izy io mba hisorohana ny zezika tsy hianjera. Ny cooler dia ampiasaina amin'ny fitrandrahana mangatsiaka aorian'ny fanamainana ary ampiasaina miaraka amin'ny fanamainana rotary, izay afaka manatsara ny fahombiazan'ny fihenam-bidy, mampihena ny hamafin'ny asa, mampitombo ny vokatra, manala bebe kokoa ny hamandoan'ny sombina ary mampihena ny hafanan'ny zezika.
4) fizotran'ny fizahana
Amin'ny famokarana, mba hiantohana ny fitoviana amin'ny vokatra vita, ny zana-kazo dia tokony hovaina alohan'ny fonosana. Ny milina sieving roller dia fitaovana sieving mahazatra amin'ny fizotry ny famokarana zezika sy zezika organika. Izy io dia ampiasaina hanasarahana ireo vokatra vita sy ny agregate tsy mifanaraka ary hahatratra hatrany ny fanasokajiana ny vokatra vita.
5) fizotry ny fonosana
Rehefa vita ny milina fonosana dia manomboka miasa ny feeder gravity, mampiditra ny fitaovana ao anaty hopper milanja ary mametraka azy ao anaty kitapo amin'ny alàlan'ny hopper milanja. Rehefa mahatratra ny sandan'ny default ny lanja dia mijanona tsy mihazakazaka ny mpamahana gravité. Ny mpandraharaha dia manala ireo entana fonosana na mametraka ny kitapo fonosana amin'ny conveyor fehikibo amin'ny milina fanjairana.